Ereyga "Hees" Ha Qalad Fahmin - Yaxye Yeebaash
Home Qoraallo Ereyga “Hees” Ha Qalad Fahmin
Ereyga “Hees” Ha Qalad Fahmin
Ereyga “HEES” ha qalad fahmin!
Waxa aan dhawr jeer arkay bulsho badan oo dib u joogsata ama ka naxda kolka aan suugaantayda qaar ka mid ah ku sheego “HEES”. Ma garan karo waxa magac dilka intaas leeg loogu sameeyay ereygan iyo cidda ku samaysay ba.
Haa waa run, oo waxa aan ka mid ahay hal-abuurka aan jeclayn in ereyadiisa uu fannaan u dhiibo dabadeed miisig la saaro. Sababaha aanan u jeclaysan waxa ka mid ah; in aan ahay qof aad uga werwera cidda aan la jaalayo. Fanka-la-tumo kolka aad dhex gasho waxa aad noqonaysa qof had iyo goor mijiliskeeda, balwaddeeda iyo baadhigeeda ku milma. Haddii aanad ahayn qof intaasi ba ka suurawdo, ugu yaraan waad ka ag dhawaanaysaa oo ka war haynaysaa. Anna arday ayaan ahay oo taasi waa ii suurageliwayday.
Naxdinta ay dadka qaarkood ka naxayaan ereyga “Hees” waxa aan qudha ku sababayn karaa fannaankii, mulaxankii, misiishankii iyo dadkii ka ag dhawaa ayaa badankoodu inaga noqday dad aan wanaagsanayn. Xaasha’a oo dhamaantood ma wada xuma, qaar badan oo ka mid ah aqoon ayaanu isu leenahay oo waa dad furfuran oo qalbi wanaagsan.
Si kasta iyo sababkasta oo shakhsi ah oo anigu aan u diiddanahay in aan dhex galo fanka la tumo, marna taasi uma noqon karto sabab aynu uga didno ereyga “Hees”.
Waayo iyada oon cuud iyo kaman iman ayaa hooyooyinkeen inoo heesi jireen. Iyada oon jaaska la aqoon ayaa geela heeso lagu waraabin jiray. Weligeed na heestu waxa ay ahayd bad ka mida badaha maansada Soomaalida ee tirada badan.
Asxaab badan oo aanu is naqaanno ayaa hal-abuurkooda u ka dhiga fanka la tumo. Qaar badan oo kale na aniga ayay ila yaabaan oo yidhaahdaan maxaad ugu diidaysaa in la qaado ereaydaada. Labada ba ma dhibsado oo ma colaysto. Waayo qofku wuu kaa aragti duwanaan karaa. Sas kama qaado in hees miisig le agtayda laga shido. Ka qaadaya ee fanaanka ah na ma colaysto. Se kuwayga ayaanan la jeclayn uun in uu masrax la soo istaago.
Fadlan la wadaag asxaabta haddii aad ka heshay.
Previous articleXasiloonida Nafta :: Barnaamijka Sirta Nolosha.
Next articleImika Nooloow – Barnaamijka Sirta Nolosha
Zuhair shagari April 25, 2019 At 4:56 am
Ballanta Alle ayaa ah in haddi qofi Alle dartii wax uga tago in Allena wax ka wanagsan ugu badalayo